Thu, Jul 19, 2018 | 20:47:48 NST
वैशाख २६ – अक्षय कुमारको फिल्म केसरीको सेटमा आगलागी भएको छ ।
रणवीर र आलिया हात थाम्दै पुगे सोनमको रिसेप्सनमा, के साँच्चै प्रेममा छन त ?
वैशाख २६ – मंगलबारको दिन सोनम कपूरका लागि निकै खास दिन रह्यो ।
​चार फेरामै सम्पन्न भयो सोनम–आनन्दको विवाह
वैशाख २५ – अभिनेत्री सोनम कपूर तथा आनन्द आहुजाले विवाहको लगन गाँठो कसी सकेका छन ।
सोनम कपूरको विवाह आज, कस्ती देखिइन् बेहुली सोनम ?
वैशाख २५ – आज बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूरको लामो समय देखिका प्रेमी आनन्द आहुजाका साथ विवाह भइरहेको छ । सोनमको विवाह बलिउडमा यो वर्षको ठूलो विवाह हो ।
प्रदीप खड्का ११ लाखमा ब्राडफोर्डको एम्बेस्डर
काठमाडौं, वैशाख २४ – अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्शका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नयाँ बानेश्वरस्थित ब्राडफोर्ड एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले चर्चित नायक प्रदीप खड्कालाई ब्राण्ड एम्बेस्डर नियुक्त गरेको छ ।
रणवीर कपूर बने ‘डाँका’
वैशाख २४ – बलिउड अभिनेता रणवीर कपूर अब एकपछि अर्को गर्दै धमाकेदार फिल्ममार्फत दर्शकसामु आउँदैछन् ।
​अदालतमा हाजिर हुन सलमान जोधपुर पुगे
वैशाख २३ – कृष्णसार मारेको अभियोगमा जमानतमा छुटेका बलिउड अभिनेता सलमान खान अदालतमा हाजिर हुन जोधपुर पुगेका छन् ।
यसरी सुरु भएको थियो सोनम कपूर र आनन्द आहुजाको प्रेम
वैशाख २३ – बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूर तथा भारतीय व्यापारी आनन्द आहुजाको विवाह हुन २ दिन मात्र बाँकी छ ।
निर्माता संघको आन्दोलनले सिनेमाको प्रदर्शन मिति अन्योलमा
काठमाडौं, वैशाख २३ – जेठमा प्रदर्शन हुने तयारीमा रहेका अधिकांश सिनेमाको प्रदर्शन मिति पर सरेको छ ।
‘भोर’ का निर्देशक भन्छन् 'खत्तम भो व्यापार'
काठमाडौं, वैशाख २३ – शुुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको सिनेमा ‘भोर’को कारोबार सामान्य रहेको छ ।
वैशाख २२ – करिश्माले सलमान र आफूबीचको सम्बन्धको कुरा गर्ने क्रममा सलमान उनकी बहिनी करीना भन्दा पनि नजिक रहेको बताएकी छिन् ।
​मेयरले गुन्यूचोलो उपहार दिएपछि ज्योति मगरको यस्तो ‘डाइलग’
वैशाख २२ – श्रीदेवी यो संसारबाट बिदा भएपछि जेठी छोरी जान्ह्वी कपूरलाई हेर्दा श्रीदेवीको सुन्दरता तथा उनको सम्झनालाई सधै ताजा बनाउनेछ ।
​भिमफेदी गाइजको ‘नजाउ रेलिमाई’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
वैशाख २१ – गीतकार विशाल गौतमले नयाँ गीत ‘नजाउ रेलिमाई’ सार्वजनिक गरेका छन् ।
वैशाख २१ – बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टको फिल्म ‘राजी’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएसँगै उनको चर्चा चुलिएको छ ।
काठमाडौं, वैशाख २१ –अभिनेता दीपकराज गिरीले टाटाको हेक्जा खरिद गरेका छन् । योसँगै दीपकराज गिरी महंगो सवारी साधन प्रयोग गर्ने नेपाली सेलिब्रेटीको सूचीमा परेका छन् ।
दीपाश्रीको ब्रतबन्ध हुँदै (भिडियोसहित)
वैशाख २१ – कलाकार तथा निर्देशक दीपाश्री निरौलाले केहीदिन अघि मात्रै परिवारसँग एउटा फोटो शुट गरेकी छिन् ।
पार्टीकै आयोजनामा सिंहदरबारमा रहेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा उनीहरुको विवाह भएको हो । परिवारका सदस्यको कमजोर उपस्थिति रहे पनि पार्टीगत हिसाबले भने भव्य रुपमा उनीहरुको विवाह सम्पन्न भएको थियो ।
श्रीदेवी राष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा सम्मानित, बोनी कपूरले रोक्न सकेनन् आँशु
वैशाख २० – बलिउडकी चाँदनी श्रीदेवी यो संसारबाट अस्ताइसकेकी छिन् तर उनी दर्शक तथा प्रशंसकमाझ सँधैको लागि अमर रहनेछिन् ।
ज्याकी च्यानकी छोरीको सडकमा बास, यस्तो छ कारण
वैशाख २० – अभिनेता ज्याकी च्यान उनको अभिनय तथा एक्सनका कारण विश्वभरी नै चर्चित छन ।
सोनमको विवाहको ६ दिन अगाडि फाराह खानको खुट्टा भाँचियो
वैशाख १९ – बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूर तथा व्यापारी आनन्द आहुजाको परिवारले उनीहरुको विवाहको मिति सार्वजनिक गरेका छन ।
​श्रीदेवीलाई दिइने राष्ट्रिय पुरस्कार थाप्न बोनी कपूर छोरीहरुका साथ दिल्लीमा
वैशाख १९ – भारतको दिल्लीमा आज आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार समारोहमा दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवीलाई उत्कृष्ट अभिनेत्रीको पुरस्कारले सम्मानित गरिन लागिएको छ ।
‘पद्मावत’मा दीपिका र रणवीरले लगाएका लुगा लिलाम गरिने
वैशाख १९ – फिल्म ‘पद्मावत’मा दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहले लगाएको लुगा फिल्म निर्मता सञ्जयलीला भन्सालीले लिलामी गर्ने भएका छन ।
४१ लागे डिठ्ठा साब, ९ वर्षदेखि सुरु भयो कलाकारिता
काठमाडौं, वैशाख १९ –डिठ्ठा साबको नामले परिचित भएका कलाकार तथा निर्देशक किशोर भण्डारीको आज जन्मदिन परेको छ ।
माग्नेलाई सिनेमा खेलाउन दीपाश्रीको अनुमति?
वैशाख १९ – भदौ २२ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने सिनेमा ‘रामकहानी’को पहिलो गीत सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
​करण जोहरको १५ करोडको ‘सेट’ मा विषालु सर्प आएपछि...
वैशाख १८ – करण जोहरको आउँदो चलचित्र ‘कलंक’ अहिले चर्चामा रहेको छ ।
वैशाख १८ – मोहम्मद आमीर हुसेन खान जुन नाम हिन्दी चलचित्र उद्योग बलिउडमा आमीर खानका रुपमा छोटो मीठो बन्यो ।
सोनम कपूरको विवाहबारे उनका बूवाले दिए जवाफ
वैशाख १७ – बलिउड अभिनेत्री सोनम कपूरको घरमा उनको बिवाहको तयारी सुरु भइसकेको छ ।
​अमिताभ बच्चनको डी.लिट. उपाधि ‘१०२ नटआउट’ले चैट
वैशाख १६ – अमिताभ बच्चनको आउँदै गरेको चलचित्र १०२ नटआउटका कारण डी.लिट डिग्री पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
काठमाडौं, वैशाख १४ – शुक्रबारदेखि सिनेमा कोहलपुर एक्सप्रेस र ह्याप्पी डेज प्रदर्शनमा आएका छन् ।
धुर्मुुसको कट्टुदेखि माग्नेको इस्टकोट खोज्दाका रोचक प्रसंग
आवश्यकता परेको ठाउँमा उनीहरुले दर्शक हँसाउनकै लागि लुंगीदेखि म्याक्सीसम्म लगाएका छन् । कति ठाउँमा त हरिवंश महिला पात्रको रुपमा पनि प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । मदनकृष्ण र हरिवंशले आफ्नो पहिरन र पोशाकले पनि दर्शकलाई मनोरन्जन दिन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएका छन् ।
'सञ्जु'मा रणवीर कपूरको पाँच अवतार
वैशाख १२ – बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तको जीवनीमा आधारित फिल्म ‘सञ्जु’को टीजर सार्वजनिक भएको छ ।
‘छक्का पञ्जा ३’ मा दीपकको साथमा दीपिका
वैशाख ११ – लामो समयदेखि अभिनेत्रीको खोजीमा रहेको ‘छक्का पञ्जा ३’ को टोलीले अन्ततः अभिनेत्री फाइनल गरेको छ । सिनेमा ‘ऐश्वर्य’मार्फत अभिनयमा डेब्यु गरेकी अभिनेत्री दीपिका प्रसाईँ सिनेमाका लागि फाइनल भएकी छिन् ।
वैशाख १० – चेक बाउन्स भएको आरोपमा दिल्लीको कडकडडूमा अदालतले सोमबार बलिउड अभिनेता राजपाल यादवलाई ६ महिनाको जेल सजाय सुनाएको छ ।
​वरुण धवनलाई ३५ करोड पारिश्रमिक दिइने खबरको वास्तविकता यस्तो
वैशाख १० – टी–सीरिजका भूषण कुमार बलिउडका उत्कृष्ट डान्सर अभिनेता वरुण धवन र कटरिना कैफका साथ बलिउडकै महंगो डान्समा आधारित फिल्म निर्माणको तयारीमा रहेका छन् ।
वैशाख १० – मिस नेपाल २०१८ को उपाधी शृंखला खतिवडाले जितिन् । उनले मिस नेपालसहित पपुलर च्वाइस र मिस फ्यासिनोको पनि उपाधि जितिन् । ‘सानैदेखि मिस नेपाल बन्छु भन्ने सपना देखेको थिएँ अहिले आएर पूरा भयो’ उनले भनिन् ।
गर्भवती भएको हल्ला चलेपछि इलियानाको यस्तो जवाफ
वैशाख १० – भारतीय मिडियाहरुमा बलिउड अभिनेत्री इलियाना डिक्रुज गर्भवती भएको खबरले चर्चा भइरहँदा इलियाना आफैँले यसबारे बोलेकी छिन् ।